Tun Tun's Photo Diary: Shwe Dagon Pagoda Night Tour
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မန္တလေး မသွားခင်ေ၇ွတိဂုံဘု၇ားကို တခါေ၇ာက်သေးတယ်။ အဲ့တုန်းကလဲ ဟောဒီကြောင် အဖြူလေးကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ခဲ့သေးတယ်။ အခုတစ်ခေါက်လဲ ထပ်တွေ.ပြန်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကြောင်တွေ ခွေးတွေ ကို ဘု၇ား ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ တွေ.၇တာ ပဲ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ သူတို.လဲ အဲလို.နေ၇ာတွေ မှာပျော်တယ်ထင်ပါတယ်။ လမ်းမတွေပေါ်က ပိုင်ရှင်မဲ့ ခွေးတွေ ကြောင်တွေ တွေ.၇င်စိတ်မကောင်းဘူး။
သူငယ်ချင်းနဲ.သွားတာဆိုတော့ စောင့်နေ၇မှာ အားနာလို. Tripod သုံးပြီးတောင်မ၇ိုက်ခဲ့ရဘူး။ ပုံတွေ အားလုံးကို High ISO ထားပြီး လက်နဲ. ငြိမ်အောင်ကိုင်ပြီး၇ိုက်ထားပါတယ်။ Noise တွေ တော့ ထတာပေါ့လေ။ မိုးကလဲ ၇ွာနေတော့ ကင်မ၇ာလဲေ၇စိုမှာ စိုး၇သေးတယ်။
ဒီအပေါ်ပုံထဲက ညာဘက်က German လူကြီးက ကျွန်တော့ကို စကားလာပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုေ၇ွတိဂုံဘု၇ားရဲ. စိန်ဖူးတော် အေ၇ာင်လက်နေတာကို မြင်၇တဲ့ နေ၇ာပြပါတယ်။ သူပြလို. မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးကျမှ သူက ကိုယ့်ကို မေးပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကလာတာလဲ တဲ့ ။ မြန်မာပြည်ကပဲလို.ပြောလိုက်တော့ သူမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။း) သူ မြန်မာပြည်မှာ နေတာ ၁၀ ကျော်ပြီလို.ပြောပါတယ်။ သူ ညပိုင်းေ၇ွတိဂုံဘု၇ား ဘက်ကို မကြာခဏ လမ်းလျှောက်ထွက်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
သိပ်မကြာပါဘူး လော်စပီကာနဲ.အော်ပါတယ်။ ဘု၇ား က ည ၁၀နာရီထိုး၇င် ပိတ်မှာမို. အားလုံး ပြန်ပေးကြပါတဲ့။ မြန်မာလိုေ၇ာ အင်္ဂလိပ်လိုေ၇ာ အော်ပါတယ်။ အဲ့တော့မှေ၇ွတိဂုံ ဘု၇ား၇ဲ. ပိတ်ချိန်ကိုသိတော့တယ်။
at 4/10/2014 10:04:00 PM